Fisafidianana tantara foronina akaiky
Fanamarihana ireo tantara foronina akaiky
I Mr Wilder sy i Jonathan Coe
Mikaroka tantara iray miresaka an'izao tontolo izao izay miseho amin'ny fifandraisan'ny olombelona vao haingana, Jonathan Coe dia mandray anjara amin'ny fahatsaran'ny antsipiriany lalina indrindra. Eny, tsy afaka miala amin'io hasarobidin'ny antsipiriany io i Coe izay mifanaraka amin'ny famaritana feno indrindra. Avy amin'ny…
Ny dihy sy ny afo, nataon'i Daniel Saldaña
Ny fihaonana dia mety ho mangidy toy ny vintana faharoa tsy misy dikany amin'ny fitiavana. Ny namana taloha dia miezaka mamerina ny toerana tsy misy intsony hanaovana zavatra tsy misy intsony. Tsy na inona na inona manokana, satria fotsiny hoe tsy mahafa-po azy ireo, fa mitady fotsiny ...
Lanitra ambonin'ilay tampon-trano, nataon'i Nathacha Appanah
Iza koa no tsy mba namela ny ranomasony tamin'ny raharahan'i Marco hitady ny reniny. Tamin'ity indray mitoraka ity dia nitarika azy hanakaiky kokoa an'i Holden Caulfield (taona, zatovo nihilistic malaza an'i Salinger) ny taona nitondran'i Lobo, ilay mahery fo. Ary ny zava-misy dia ny endrik'ilay reny ...
Talata fahafito, nataon'i El Chojin
Ny tantara rehetra dia mila fizarana roa raha misy karazana synthesie ho hita, izay ny momba ny rafitra rehetra izay miditra amin'ny faritry ny mimicry mampihetsi-po. Tsy resaka fanasongadinana an'ity karazana fitantarana roa ity eo alohan'ilay olona voalohany. Satria koa ...
Tsy hita, nataon'i Alberto Fuguet
Indraindray ny fiteny dia miaraka amina tantara iray miaraka amin'ny hazavana mazava indrindra. Satria ny fitadiavana olona nanjavona dia tsy mitaky lyrical na artifice. Ny fahaiza-mitantara fitantarana dia mahatonga ity làlana mankany amin'ny fihaonan'ny tena manokana ity ho fitambaran'ny fahamarinana sy ny akaiky hahatonga antsika hanakaiky kokoa ny rehetra ...
Hafa, nataon'i Eloy Moreno
Fanamafisana tsara amin'ny famakiana, firindrana fitantarana iray eo amin'i Eloy Moreno sy Albert Espinosa. Satria samy manoratra ny tantarany miaraka amin'io mariky ny maha-azo itokiana io manodidina ny stridences ny fiainana sy ny symphonie farany tsy nampoizina ny tena mahavariana. Mety ho toy izany, raha ...
Ilay mpitondratena, nataon'i José Saramago
Ireo mpanoratra lehibe toa an'i Saramago no mitazona ny sangan'asany amin'izao fotoana izao. Satria rehefa misy sanganasa mirakitra ny maha-olombelona voarindra ao anaty alimia literatiora, dia tratra ny fisian'ny fisiana fiainana. Ny lohahevitry ny fihoaran'ny lova artista na literatiora avy eo dia mahatratra ny tena fifandraisany ...